Fandraharahana : tohana ho an’ny orinasa ny Blueline business | NewsMada
Fandraharahana : tohana ho an’ny orinasa ny Blueline business
Manatsara sy miezaka manome fahafaham-po ny mpanjifa ny orinasa Blueline. Tolotra vaovao hafa indray ho an’ny orinasa, hanatsarana ny seha-pihariany avy ny Blueline business.
Manolotra tolotra vaovao ho an’ny mpanjifa indray ny orinasa Blueline. Voakasik’izany ny mpandraharaha sy ny orinasa tsy ankanavaka, lehibe na madinika. Tonga eto Madagasikara ny tolotra Blueline business, hikarakarana ny lafiny teknolojian’ny fifandraisan-davitra niomerika eny amin’ny orinasa (Itec). Efa maherin’ny 4.000 ny karazana orinasa nokarakarain’ny Blueline business, any ivelany, eto an-toerana ary manodidina an’i Madagasikara.
Mampiavaka ity tolotra ity ny famaliana haingana ny hetaheta sy ny filàn’ny orinasa, miasa isan’andro aman’alina. Manampy ireo, manoro lalana ny orinasa ny Blueline ary azo antoka ny fiarovana ny antontam-baovao. Tanjona ny vao mainka hivoaran’ny orinasa sy tsaratsara kokoa.
Mamaly ny filan’ny orinasa
Misy lafin-javatra telo ny mampiavaka ny tolotry ny Blueline business. Voalohany, ny fahazoana fifandraisan-davitra tena matanjaka sahaza ny haben’ny orinasa tsirairay. Faharoa, azo antoka ny fitahirizana ny antontam-baovaon’ny orinasa ao anatin’ny Data center an’ny Blueline, tantanin’ny teknisianina manana traikefa. Tafiditra ao anatin’ny fotodrafitrasa As A service io tolotra io. Manafaingana ny fifaneraserana amin’ny orinasa io fomba io, ka mamaly avy hatrany ny hetahetan’ny mpanjifa.
Fahatelo, ny fitantanan’ny Blueline business ny fitaovam-pifandraisan’ny orinasa mba haharitra sy mivoatra, amin’ny alalan’ny fampiasana ny Software As A service. Afaka ampiasaina arakaraka izay ilana azy sy tian’ny orinasa io fitaovana io.
Tato anatin’ny dimy taona farany, nisesy ny tolotra vaovao novokarin’ny Blueline.
2017: Blueline business; 2016: Famoahana ny Bip, mpandraharaha amin’ny finday vaovao aty Madagasikara; 2015: Famoahana ny Faisceau Hertzien point-multipoint, tambajotra matanjaka ho an’ny orinasa; 2014: Voalohany amin’ny tambajotra 4G LTE; 2011: Mpandraharaha voalohany amin’ny televiziona niomerika an-tanety.